स्पर्श संसार- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो देशमा श्रवण–दृष्टिविहीनलाई केन्द्रित गरी केही शिक्षण कार्यक्रम नै बनाइएका छैनन् ।
मंसिर २१, २०७५ विभु लुइटेल
काठमाडौँ — नयाँ बानेश्वरका १८ वर्षीय सौरभ थापा न केही देख्न सक्छन्, न केही सुन्न नै । सात महिनाभन्दा पनि कम आमाको गर्भमा रहेपश्चात् उनको जन्म भयो । जन्मँदा सात सय ५० ग्रामका मात्र थिए, इन्क्युबेटरमा राख्नुको विकल्प थिएन । त्यहाँबाट निस्किएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनका दुई इन्द्रियले काम नगर्ने थाहा भयो । कान नसुन्ने भएपछि बोली पनि फुट्नेवाला थिएन ।
आमा गोमा र बुवा गोविन्द थापाका पहिलो सन्तान हुन्, सौरभ । पहिलोपटक उनको शारीरिक अवस्थाबारे डाक्टरले भनिदिँदाको क्षणको सम्झनाले अहिले पनि उनको परिवार झस्कन्छ । छोरा श्रवण–दृष्टिविहीन भएको थाहा पाएका दिन गोविन्द पत्नी र छोरालाई अस्पतालमा एक्लै छोडी चेतशून्य अवस्थामा घर फर्किएको सुनाउँछन् । आमाले धैर्य गरी सम्हालेर सौरभलाई घर पुर्‍याएकी थिइन् । कति दिनसम्म भोक, निद्रा केही नलागेका, केवल रुँदै बसेका दिनका सम्झनाले उनीहरूलाई अहिले पनि नराम्रोसँग झस्काउँछन् ।
उपचारका अनेक विधि प्रयत्न गर्दा पनि नभएपछि नजिकका अरूले भनेका भरमा झारफुकमा पनि सौरभलाई लगियो । धर्म परिवर्तन गर्‍यो भने ठीक हुन्छ भन्ने व्यक्ति पनि नभएका होइनन् । श्रवण–दृष्टिविहीन नभई मानसिक पक्षाघात (सेरिब्रल पल्सी) भएको हो कि भनी त्यसको उपचार पनि सुरु गरिएको थियो । उपाय अनेक लगाए, नतिजा आफूले सोचेजस्तो आएन ।
२०६८ सालको जनगणनाले दिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने सौरभजस्तै श्रवण–दृष्टिविहीनको संख्या नेपालमा नौ हजार चार सय ३६ रहेको छ । ‘तर, त्यो यकिन तथ्यांक भने होइन,’ नेपाल बहिरा महासंघका पदाधिकारी सानु खिम्बाचाले दाबी गरे । भारतलगायत अन्य देशमा रहेका श्रवण–दृष्टिविहीनको संख्या हेरी त्यस्तै अनुपातमा नेपालमा रहेका यस्ता व्यक्तिको संख्या अनुमान मात्र गरिएको, तर यकिन भने नभएको उनको जिकिर छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अपांगताका १० प्रकारमा श्रवण–दृष्टिविहीनतालाई पनि राखिएको छ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ, बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाज, श्रवण–दृष्टिविहीन संघ नेपाल र नेपाल नेत्रहीन संघले संयुक्त रूपमा यस्ता व्यक्तिको हकहितका लागि काम गर्दै आइरहेका छन् ।
श्रवण–दृष्टिविहीनता राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रले सञ्चालन गरेको साप्ताहिक कक्षामा हरेक बुधबार उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट केही विद्यार्थी आफ्ना अभिभावकसँग आउँछन् । त्यहाँ तिनलाई स्पर्शका माध्यमबाट सञ्चार गर्न मात्र नभई दाँत माझ्न, खाना खान र अन्य सामान्य क्रियाकलाप गर्न सिकाइन्छ । यति हँुदाहँुदै पनि तिनका सबै भावनालाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेको त्यहाँका शिक्षक निकेतन श्रेष्ठ बताउँछन् । यहाँ आउने अधिकांश व्यक्ति किशोरावस्थाका हुन् । समयक्रममा तिनमा देखिने शारीरिक परिवर्तन र त्यसपश्चात् पैदा हुने यौन आकांक्षाका कारण कहिलेकाहीँ कोही अलि आक्रामक बनिदिने पनि उनले देखेको बताए ।
गाम्नाङटार, ओखलढुंगाकी २० वर्षीय शर्मिला खड्का पनि सौरभजस्तै श्रवण–दृष्टिविहीन हुन् । भोक लागेको, शौचालय जान मन लागेको जस्ता उनका सामान्य मागबाहेक अरू केही बुझ्न उनको परिवारलाई हम्मेहम्मे पर्छ । घरका सबै दिउँसो कतै न कतै जाने हँुदा उनका लागि आवश्यक खानेकुरा त छुट्याएर जान्छन् । कहिलेकाहीँ छामछुम गर्दै घरभन्दा निकै पर पुगेको र पछि भेट्न गाह्रो भएका घटनाहरू पनि छन् । ‘अहिले त आफूले स्याहारौँला, हामीपछि कसले उसको ख्याल राख्छ ?’ बुबा सूर्यबहादुर खड्का निराशा व्यक्त गर्छन् ।
शर्मिला आफ्नो शरीर र त्यसमा हुने प्रक्रियाबारे खासै अवगत छैनन् । महिनावारी समयमा हँुदैन, भएका बेला आमाबाहेक कोही छैन उनको स्वास्थ्य र सरसफाइको ख्याल राख्ने । भारतमा उनीजत्तिकै युवाले भान्छाका सानातिना काम गर्नेदेखि लिएर सामान्य सरसफाइसमेत गर्ने गरेको उनकी शिक्षक शैलु खरेल सुनाउँछिन् । ‘श्रवण–दृष्टिविहीनलाई केन्द्रित गरी केही शिक्षण कार्यक्रम नै बनाइएका छैनन् हाम्रो देशमा,’ उनी गुनासो गर्छिन् ।
श्रवण–दृष्टिविहीनताले मुख्य गरी खोज्ने भनेको कसैको साथ हो । ताल्चीखेल, ललितपुरका निश्चल सुनारका लागि साथी भनेकै उनकी आमा उमा सुनार हुन् । १४ वर्षीया उनलाई तीन महिनाका हँुदा आँखा डेढो देखी तिलगंगामा उपचारका लागि लगिएको थियो । उमाले त्यहाँबाट छोराको उपचार सन्तोषजनक पाउन सकिनन् । ‘आँखा नै फेर्न चेन्नाई लगेँ,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘तर, त्यहाँका डाक्टरले पनि हार खाए ।’ उनलाई अन्त कतै लगी उपचार गराउन त्यहाँका चिकित्सकले सल्लाह त दिए । तर, आर्थिक अवस्थाका कारण कतै लगिहाल्न सम्भव पनि थिएन ।
पहिलो सन्तान श्रवण–दृष्टिविहीन जन्मिएपछि दोस्रो र तेस्रो सन्तान हुने बेला उमाको मनमा एक प्रकारको त्रासले डेरा जमाउँथ्यो । त्यसैले गर्भवती अवस्थामा कति अस्पताल धाइन्, कति डाक्टरलाई भेटी परामर्श लिइन्, त्यो उनलाई मात्र थाहा छ । अझ, आमाबाहेक अरूको स्पर्श सितिमिति मन नपराउने निश्चलसँग संवाद गर्न पनि गाह्रो छ । बेलाबेला घरमा गएरै उनलाई सामान्य सञ्चार सिकाउन खोज्ने शिक्षकलाई उनको यस आचरणले केही कठिनाइ भएको बुझिन्छ ।
श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिसँग सहज रूपमा सञ्चार गर्न ह्याप्टिक सिग्नल नाम गरेको माध्यमको विकास भएको छ । उनीहरूलाई केही कुराको जानकारी दिन उनीहरूका ढाड, पाखुरा, तथा खुट्टामा स्पर्शले संकेत गरी सञ्चार गर्न सकिन्छ । नेपालमा करिब ४० ह्याप्टिक सिग्नल प्रयोगमा छन् । तर, तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सबैलाई सिकाउन भने सकिएको छैन । स्पर्श सांकेतिक भाषाको प्रयोग र विकासमा केही संस्था काम गरिरहेका छन् । पछि श्रवण–दृष्टिविहीन भएकालाई यो सिकाउन सजिलो छ भने जन्मजात भएकालाई सिकाउन निकै कठिन । यी तीनकी शिक्षक शैलु भन्छिन्, ‘यही नै अहिले हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
twitter : @LuitelBibhu प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:०३
इन्स्टाग्राम स्टोरिज कसरी देखाउने ?
मंसिर २१, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको शैली बुझ्ने हो भने फेसबुक प्रोढमाझ बढी लोकप्रिय बन्दैछन् भने इन्स्टाग्राम नयाँ पुस्ताका प्रयोगकर्तामाझ चर्चित । आफन्त र परिवारका सदस्य फेसबुकमा बढी सक्रिय हुन थालेपछि नयाँ पुस्ता फेसबुकमा कम सक्रिय हुन थालेको अध्ययनले देखाएको छ ।
फोटो पोस्ट गर्न मन पराउने र आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरूबाट सुरक्षित रहने प्लेटफर्मको खोजीले गर्दा अहिले इन्स्टाग्रामको लोकप्रियता बढ्दो छ । फेसबुक स्वामित्वको फोटो सेयरिङ एपमा धेरै फिचरहरू स्न्यापच्याटबाट कपी गरिएका छन् । टीनएज प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय रहेको स्न्यापच्याटको स्टोरिज, सेक्रेट च्याटजस्ता फिचर आफ्नोमा कपी गरेपछि इन्स्टाग्रामको प्रयोगकर्ता स्न्यापच्याटको भन्दा बढी छन् ।
स्न्यापच्याटको लोकप्रियता किन बढ्दो छ भने यसमा कम उमेरका प्रयोगकर्ता बढी हुने गर्थे । एक साथीले अर्कोलाई पठाएको तस्बिर केही मिनेटमै स्वत: डिलिट हुने फिचरका कारण प्रयोगकर्ता भविष्यमा सोही फोटोका कारण आफूलाई नराम्रो स्थिति आइपर्ला भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा थिएनन् । झन्, यसको स्टोरिज फिचरमा प्रयोगकर्ताले हालेको फोटो २४ घण्टामा स्वत: डिलिट हुन्थ्यो ।
स्न्यापच्याटको लोकप्रियताको यही कारण देखेर फेसबुक स्वामित्वको इन्स्टाग्रामले यो फिचर कपी गरेको थियो । अर्को कम्पनीको फिचर जस्ताको तस्तै कपी गरेको आरोप खेपे पनि इन्स्टाग्रामलाई कुनै असर परेन किनकि उसका धेरै प्रयोगकर्ताले यसलाई मन पराए र प्रयोग गर्न थाले ।
तर, इन्स्टाग्राम पनि अहिले पहिलेको जस्तो छैन् । फेसबुकले आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि पछिल्लो समय इन्स्टाग्राम पनि फेसबुककै अंगजस्तो बनेको छ । धेरैभन्दा धेरै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई इन्स्टाग्राममा जोड्ने कम्पनीको लक्ष्यले फेसबुकका धेरै सदस्यहरू अहिले इन्स्टाग्राममा जोडिएका छन् । आफ्ना साथीहरूमाझ २४ घण्टाको लागि मात्रै फोटो सेयर गर्न मिल्ने स्टोरिज फिचरमा इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढेको छ । फेसबुकले यो फिचर आफ्नो म्यासेन्जर र फेसबुक एपमा राखे नयाँ पुस्ताका प्रयोगकर्ताहरू भने इन्स्टाग्राममै यो फिचर प्रयोग गर्न बढी रुचाउँछन् ।
स्टोरिजमा फोटोसहित राख्न मिल्ने फरक–फरक स्टिकर र स्वरूपले पनि प्रयोगकर्तालाई आकर्षण गरिरहेको छ । अहिले इन्स्टाग्राम स्टोरिजको दैनिक प्रयोगकर्ता ४० करोड नाघेको छ । यो स्टोरिज सुरुमा प्रयोग गर्ने स्न्यापच्याटको कुल प्रयोगकर्ताभन्दा बढी हो । तर, फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू पनि अहिले इन्स्टाग्राममा ह्वात्तै बढेको छ । यसैकारण इन्स्टाग्राममा स्टोरिजमा फोटो अपलोड गर्दा आफ्ना परिवार र आफन्तले देख्ने हुन् कि ? उनीहरूले आफ्ना फोटो देखेर के भन्ने हुन् भन्ने डर बढ्दो छ ।
इन्स्टाग्रामले यसै साता नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ, जसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो स्टोरिजमा राखेको फोटो आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मात्रै देखाउन मिल्छ । यो फिचर फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टलाई व्यवस्थापन गर्ने जस्तो छ । फेसबुकमा आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टमा भएका व्यक्तिलाई कलेजको साथी, कार्यालयको साथी, परिवार भनेर ग्रुपमा राखेजस्तै इन्स्टाग्राममा आफ्नो
स्टोरिज हेर्न सक्ने समूहलाई पनि यसैगरी व्यवस्थापन गर्न मिल्छ । यो फिचर प्रयोगका लागि इन्स्टाग्रामको स्टोरिज सेयर गर्नुअघि एड्भान्स सेटिङमा जानुपर्छ, जहाँ इडिट योर क्लोज फ्रेन्ड लिस्ट भन्ने अप्सन देखिन्छ । क्लोज फ्रेन्ड लिस्ट अप्सनमा क्लिक गरेपछि आफूलाई आफ्नो लिस्टमा एड गर्न मन लागेको साथीहरू समावेश गर्न सकिन्छ ।
जुन साथीहरूलाई लिस्टमा समावेश गरिएको छ, उक्त साथीहरूलाई त्यसबारे नोटिफिकेसन जान्छ । सूचीमा समावेश गरिएको साथीलाई हटाउन पनि मिल्छ । यो सूची तयार पारिसकेपछि उक्त समूहलाई देखिने गरी मात्रै स्टोरिज सेयर गर्न मिल्छ । यसले गर्दा आफ्ना साथीहरूलाई मात्रै देखाउन मन लागेको पोस्ट उनीहरूले मात्रै देख्छन् । यस्तो सूचीका साथीहरूसँग मात्रै सेयर गरिएको स्टोरिजमा उनीहरूले हरियो चिह्न देख्न सक्छन्, जसमा क्लोज साथीलाई मात्रै सेयर गरेको भन्ने जनाउ हुन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:०१